Manje ungaya noma iyiphi ubuhle futhi ubuyekeze isithombe. A ukugunda izinwele ezinhle, yebo, ukuhlobisa, kuvumela owesifazane azizwe abasha bajabule futhi. Into ebaluleke kakhulu - ukuthola wezinwele professional ngesandla ukukhanya. Kodwa awusebenzi ngaso sonke isikhathi nesikhathi ukuvakashela salon ubuhle, ngaphezu, umbuzo kanjani nezinwele ngokwayo, kungase kuvele ngenxa imodi umnotho, okuyinto langena ngalesi sikhathi ikakhulukazi emndenini. Futhi uma ukudalwa zezinwele ezikhangayo phambi awunankinga ke sithathe inselele, akuzona zonke isikele.
Eqinisweni, njengoba ukugunda izinwele ngokwayo - hhayi umbuzo onjalo nzima. Kubalulekile kuphela ukwazi indlela futhi ukulandelana izenzo. Yiqiniso, uzodinga Thenga kakhulu ezinhle izinga barber sikelo. Futhi akunandaba ukuthi ufuna ukwenza kwekhanda eziyinkimbinkimbi noma nje Ukunquma esiphongweni. Ithuluzi elihle - impumelelo umcimbi. Ingabe engadingekile futhi imithi thinning, ngezinye izikhathi ingaba umthombo enhle ukusingatha onqenqemeni ukugunda izinwele.
Uma udinga ukuthola impendulo yombuzo kanjani nezinwele ngokwayo, is baqeqeshwe kuqala kwi bang. Kufanele ayesebenza endaweni efanele, ukuthi impela indlela okuvame uzigqoka. Izinwele asele fixed ezikhumulweni. Ngakho ngeke aphazamise usika esiphongweni. Manje thatha esincane salo (ububanzi akumele leqe ngamasentimitha amane) kuthiwa nekama kahle ke, ngokucophelela ngamanzi. Nakuba sekuwumkhuba ukusika esiphongweni ezomile, lokhu kungenxa yokuthi ngakho kungenzeka ukulawula obuphelele oyifunayo.
Strand is uqale ukucindezela phakathi Inkomba neminwe phakathi isandla sobunxele (Yiqiniso, uma kwesokudla ngalutho), khona-ke sisalokhu, nemikhawulo yomhlaba wakhe sheared. Udinga ukuya umugqa of iminwe yakhe. Manje ukuthi uye wathola ubude edingekayo, ungakwazi Ukunquma lonke umucu wokuqala. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze ukunqanda izinwele entsha nalo futhi ngokucophelela usike ngokweqile.
Uma unesithakazelo kangakanani nezinwele uqobo lapho bang emaningi kakhulu, kufanele-ke leyabantu izingqimba ezimbili. I ephansi anqunywe ezingeni oyifunayo, elingenhla wagwazwa phezulu. Konke kuyafana kuchaziwe ngenhla. Kusenjalo ungqimba phezulu izinwele ukusika ezansi. umugqa Sika alunge imithi thinning.
Uma ungathandi nezinwele bebodwa, ngesikhathi esifanayo ukuqondisa izinwele uphela phezu kwekhanda, bese-ke ngeke kube nzima kuka nge bang. Kuyadingeka ukwenza sokuvalelisa longitudinal. Khona-ke, ezimanzisa izinwele, kubalulekile ukuba ukunqanda imicu ngabanye ngeminwe yakho, futhi uthathe isinyathelo ngokuvumelana nesimiso njengoba kuchaziwe ngenhla.
Ingabe ufuna ukuguqula kancane wena? Khona-ke kufanele kube ophethe ikamu abukhali ngamazinyo emihle, izinga sikelo, izibopho, noma izikhonkwane ezivamile, imithi thinning.
Kubantu, izinto zase zishintshile. Kaningi baba nesithakazelo kanjani umshini nezinwele. Kufanele kwenziwe ngokucophelela, kancane, futhi ngaso sonke isikhathi - a, ikhanda ahlanzekile ezomile. Udinga ukucacisa ubude kwekhanda oyifunayo, incike onjani okunamathiselwe uthatha i umshini. Inqubo ngokuvamile iqala entanyeni. Zingu izinwele kumelwe iphakanyiswe nge ikamu futhi umlomo wombhobho kufanele kube ukuxhumana ikhanda uvalwe. Ngokulandelayo, udlulela esifundeni yesikhashana, abese - umqhele. Bekufanele ukuncishiselwa ahlanzekile yonkana ikhanda. Umphumela kungenziwa kwesokunxele njengoba kunjalo, nje wenza edging. Uma udinga ukwenza gxuma encane, ke nje kuthatha inhloko, ephansi ukuphakama, bese kusetshenzwe by endaweni occipital. Ayikho into elukhuni ngakho.
Uma ngasizathu simbe abangethembi bezinwele, ufuna ukuba bonge imali noma nje ngeke ngikwazi ukukhokhela uhambo stylist ngenxa yokungabi nesikhathi esanele, kungenzeka ukuthola impendulo yombuzo kanjani nezinwele uqobo.
Chinchillas ekhaya. Ukunakekelwa nokulungiswa. Lokuzaliswa chinchillas ekhaya. Chinchilla: isiliva British
Baby ukudla "Similac": Izibuyekezo